အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ မြင်သူ တိုင်း သဘောကျစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးပွင်ဖြူ ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Yoe
အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ မြင်သူ တိုင်း သဘောကျစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မိုးပွင်ဖြူ ရဲ့ ဗီဒီယို….
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နာမည်ကြီးနေသူလေး မိုးပွင့်ဖြူ ကတော့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တက်သစ်စ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးပွင့်ဖြူလေးက အရမ်းစားပုံတွေ အမြဲတမ်း တင်ပေးနေတာကြောင့်း ပုရိသတွေကြားမှာတော့ အရမ်းကို ရေပန်းစားနေ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကျစ်လျစ်သွယ် လျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် မိုးပွင်ဖြူ ကတော့ အမြဲကို မရိုးနိုင်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ညို့ယူထားတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလို ဖက်ရှင်အလန်းတွေနဲ့ရိုက်ချက်တွေကလည်း ပုရိသတွေကို ကြွေစေ ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေကို အသားပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြင်း တဲ့ ပုံရိပ်တွေက လည်း ပုရိသတွေ ကို ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်သွားအောင် ဖမ်းစားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီပိုမရှိပဲ သွယ်လျကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဘယ်ဖက်ရှင်နဲ့ မဆိုလိုက် ဖက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် မိုးပွင့်ဖြူ ရဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ နာမညျကွီးနသေူလေး မိုးပှငျ့ဖွူ ကတော့ ခဈြစရာကောငျး တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈသလို တကျသဈစ မျောဒယျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ မိုးပှငျ့ဖွူလေးက အရမျးစားပုံတှေ အမွဲတမျး တငျပေးနတောကွောငျ့း ပုရိသတှကွေားမှာတော့ အရမျးကို ရပေနျးစားနေ တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈသလို ကဈြလဈြသှယျ လပြွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျ ဖဘှေ့တျပျေါတှငျ မိုးပှငျဖွူ ကတော့ အမွဲကို မရိုးနိုငျတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ညို့ယူထားတာ လညျးဖွဈပါတယျ။အမွဲလို ဖကျရှငျအလနျးတှနေဲ့ရိုကျခကျြတှကေလညျး ပုရိသတှကေို ကွှစေေ ခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး အလှတရားတှကေို အသားပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုပွငျး တဲ့ ပုံရိပျတှကေ လညျး ပုရိသတှေ ကို ရငျတှတေလှပျလှပျခုနျသှားအောငျ ဖမျးစားနိုငျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အဆီပိုမရှိပဲ သှယျလကြဈြလဈတဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ဘယျဖကျရှငျနဲ့ မဆိုလိုကျ ဖကျနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျကွီးတှကျ မိုးပှငျ့ဖွူ ရဲ့ မိမိုကျလှနျးနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစာလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ဗီဒီယို
မိသားစုတွေကို သတိရနေတဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာ တဲ့ မအေးသောင်း